Gacan-gashiyaasha Deerskin Alaab-qeybiyeyaasha iyo Warshad - Shiinaha Soosaarayaasha gacmo-gashiyada Shiinaha Deerskin
Gacmo gashi gacmo-gashi oo casri ah oo xijaab leh
Ka samaysan maqaar jilicsan oo waara ， Maqaarka dambe ee gacmo gashi ee lagu garto daloollo jilicsan oo jilicsan, suunka curcurka oo leh badhan adag oo xiritaanka. Kuwa kale waxay isku ururiyaan 100% cabir feeece ah. Iskudarka ugufiican.Fudud iyo qurux. dhabarka hawo bixiyaa waxay bixisaa ugu badnaan-neefsasho iyo dabacsanaanta gacmahaaga.Waxay ku habboon tahay wadista, baaskiil wadista, baaskiil wadista, jimicsiga, isboortiga banaanka, jir dhiska Super jilicsan hadana iska caabin ah oo xoogan! ● Farshaxanka maya: DG-015M ● Waxyaabaha: 100% deerskin dhab ah ining Dahaarka: dahaarka dhogorta ● Midabka: Madow b ...
Gacmo gashi gacmo furan oo deerskin ah oo casri ah oo saddex dhibcood leh
Ka samaysan maqaar jilicsan oo waara ， Naqshad naqshadeysan, oo leh 3 dhibic oo gacan ah oo tolida dhabarka. Hal furitaan oo yar iyo hal suumanka gacanta oo leh xirid dhaqso leh oo lagu xirayo cabbirka. Sidoo kale balastar dhex dhexaad ah oo dhexdhexaad ah oo ku wareegsan curcurka gacmo gashi, Qurux iyo ku habboonaan. Ku habboon wadista, baaskiil wadista, baaskiil wadista, jimicsiga, isboortiga banaanka, jimicsiga iyo munaasabado badan. Super jilicsan hadana iska caabin ah oo xoogan! ● Farshaxanka maya: DG-008H ● Waxyaabaha: 100% deerskin dhab ah ining Dahaarka: dahaarka kaashka ● Midabka: Madowga madow iyo midabada kale
galoofyo gacmo goys ah oo gacmo furan oo saddex dhibcood leh
Ka samaysan maqaar jilicsan oo adkeysi leh ， Dhammaantood waa gacmo lagu sawiray Naqshadeynta oo leh 3 dhibic oo tolmo gacmeed dhabarka ah. Hal furitaan oo yar iyo hal suumanka gacanta oo leh xirid dhaqso leh oo lagu xirayo cabbirka. Qurux iyo fudayd. Ku habboon wadista, baaskiil wadista, baaskiil wadista, jimicsiga, isboortiga banaanka, jimicsiga iyo munaasabado badan. Super jilicsan hadana iska caabin ah oo xoogan! ● Farshaxanka maya: DG-007H ● Waxyaabaha: 100% deerskin dhab ah ining Dahaarka: Dahaarka kaashka ● Midabka: Madowga Madoow iyo midabada kale /8.5,M/9,L/9.5 ...
Deerskin wadista galoofyo gacmo-gacmeed casri ah oo leh saddex dhibcood oo tolmo gacmeed ah
Waxay ka samaysan tahay naqshad jilicsan oo waarta st naqshad gacmeed, Mid ka mid ah furitaanka yar ee dhinaca cuffka. Iyo Koox dhexdhexaad ah oo laastik ah ku wareegsan curcurka galoofyada Ku habboon in la xidho. Waxaadna siisaa taam raaxo leh gacmahaaga.Waxay ku habboon tahay wadista, baaskiil wadista, baaskiil wadista, jimicsiga, ciyaaraha dibadda, jimicsiga. Super jilicsan weli adkaysi leh oo xoog leh ,. No Farshaxanka maya: DG-006H ● Waxyaabaha: 100% maqaarka dhabta ah ee maqaarka /8.5,M/9,L/9.5,XL/10 EM OEM: Haa ...
Deerskin wadista galoofyo gacmo gashi oo caadi ah oo leh saddex dhibcood
Waxay ka samaysan tahay naqshad jilicsan oo adkeysi leh ， naqshad gacmeed, Hal furitaan oo yar oo dhinaca kafateerka ah.Kulunalee badhanka adag ee ku habboon Xirashada. Ku habboon wadista, baaskiil wadista, baaskiil wadista, jimicsiga, isboortiga bannaanka, jir dhiska. Super jilicsan hadana iska caabin ah oo xoogan! No Farshaxanka maya: DG-005H ● Waxyaabaha: 100% deerskin dhab ah ining Dahaarka: dahaadh la'aan ● Midab: Madoow Madoow iyo midabbada kale /8.5,M/9,L/9.5,XL/10 EM OEM: Haa ● MOQ: 200 prs
Deerskin wadista galoofyada dharka gacmo gashi leh
Maqaarka dambe ee gacmo gashi ee lagu garto godad jilicsan oo jilicsan, suumanka gacanta oo leh xirid adag oo adag. Ku habboon in la isticmaalo. Maqaar daloolsan iyo gadaal hawo leh ayaa bixiya awoodda ugu badan ee neefsashada iyo dabacsanaanta gacmahaaga.Waxay ku habboon tahay wadista, baaskiil wadista, baaskiil wadista, jimicsiga, isboortiga bannaanka, jir dhiska. Super jilicsan hadana iska caabin ah oo xoogan! No Farshaxanka maya: DG-003H ● Waxyaabaha: 100% deerskin dhab ah ining Dahaarka: ma jiro dahaadh ● Midab: bunni madow iyo midabbada kale
Deerskin wadista moodada gacmo gashi / gacmo gashi lagu sameeyay
Ka samaysan maqaar jilicsan oo adkeysi leh ， Dhammaantood waa gacan-tolmo. Aad u jilicsan hadana adkaysi leh oo xoog leh, Maqaar daloolsan iyo gadaal hawo leh ayaa bixiya awooda ugu badan ee neefsashada iyo dabacsanaanta gacmahaaga. suunka curcurka oo leh badhan adag oo xiritaanka. Ku habboon in la isticmaalo Waxay ku habboon tahay wadista, baaskiil wadista, baaskiil wadista, jimicsiga, isboortiga bannaanka, jir dhiska. No Farshaxanka maya: DG-002H ● Waxyaabaha: 100% deerskin dhab ah ining Dahaarka: Dahaarka kaashka brown Midabka: Madowga Madoow iyo midabada kale ● Cabirka: Mudanayaasha: S / 6.5, M / 7, L / 7.5, XL / 8 Ragga: S /8.5,M/9,L/9.5, ...
Ka samaysan maqaar jilicsan oo adkeysi leh ， Dhammaantood waa gacmo lagu sawiray Naqshadeynta oo leh 3 dhibic oo tolmo gacmeed dhabarka ah. Hal furitaan oo yar oo ka furan cuff.furayaashu waxay noqon karaan baabacooyinka ama dhabarka. Waxay kuxirantahay adiga adiga. Ku habboon wadista, baaskiil wadista, baaskiil wadista, jimicsiga, isboortiga bannaanka, jir dhiska. Super jilicsan hadana iska caabin ah oo xoogan! ● Farshaxanka maya: DG-001H ● Waxyaabaha: 100% deerskin dhab ah ining Dahaarid: dahaadh la'aan ● Midab: bunni madow iyo midabbada kale /8.5,M/9,L/9.5,XL/10 EM OEM: Haa ● MOQ: 200 prs
Gacmo gashi deerskin ah oo moodada badh farood leh / far la'aan wadid ah
Ka samaysan maqaar jilicsan oo waara ， si fiican u dhagan oo si fiican u siiya gacmaha gacmo gashiyada maqaarka oo lagu garto godad jilicsan oo jilicsan, suunka curcurka oo badhanka adag la xidho Ku habboon in la isticmaalo. Maqaar daloolsan iyo gadaal hawo leh ayaa bixiya awoodda ugu badan ee neefsashada iyo dabacsanaanta gacmahaaga. Mid kasta oo ka mid ah galoofyada gacmaha ee farta badhkeed ah waxaa sameeya farsamayaqaanno leh in ka badan 10 sano oo khibrad ah. Waxay ku habboon tahay wadista, baaskiil wadista, baaskiil wadista, jimicsiga, isboortiga bannaanka, jir dhiska Super jilicsan hadana adkaysi ...
Gacmo gashi gacmo gashi deerskin ah oo aan faro lahayn ayaa wadata oo leh saddex dhibcood
Ka samaysan maqaar jilicsan oo waara ， si fiican u dhagan oo si fiican u siiya gacmaha gacmo gashiyada deerskin ma aysan qaabeyn wax dahaadh ah, suumanka curcurka oo ay ku xiran tahay silsiladda Viscose. Ku habboon in la isticmaalo. Iyo sidoo kale ku bixi awoodda ugu badan ee neefsashada iyo dabacsanaanta gacmahaaga. Mid kasta oo ka mid ah galoofyada gacmaha ee farta badhkeed ah waxaa sameeya farsamayaqaanno leh in ka badan 10 sano oo khibrad ah. Waxay ku habboon tahay wadista, baaskiil wadista, baaskiil wadista, jimicsiga, isboortiga bannaanka, jir dhiska Super jilicsan oo hadana adkaysi iyo xoog badan, suunka curcurka iyo xiritaanka snapka ee la hagaajin karo ...